सार्कको विकल्पमा बिमस्टेक !
सार्कको विकल्पमा बिमस्टेक !	By नवीन सन्देश on	१ कार्तिक २०७३, सोमबार १०:०३
काठमाडौँ । के ‘बिमस्टेक’ सार्कको विकल्प हो ? यही विषयमा पछिल्लो समय भारतले ‘ब्रिक्स सम्मेलन’को क्रममा छलफल अघि सारेको छ । भारतले सार्कको विकल्पको रूपमा बिमस्टेक मुलुकको राष्ट्राध्यक्षबीच निम्तो दिएर पाकिस्ताललाई अलग गर्ने प्रयास गरेको प्रस्ट देखिन्छ ।
भारतमा आयोजित ब्रिक्स सम्मेलनको दौरानमा बिमस्टेक नेताहरूबीच चीन, रुस, दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलका नेताहरूसँग भेटघाट भएको छ । बिमस्टेक अर्थात् ‘द वे अफ बंगाल इनिसिएटिभ फर मल्टी–सेक्टरल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कोअपरोसन’ मा भारतको अलावा बंगालको खाडीआसपासका मुलुकहरू सहभागी रहेका छन् । जसमा बंगलादेश, भुटान, म्यानमार, नेपाल, श्रीलंका र थाइल्यान्ड रहेका छन् । भारत–पाक विवादपछि भारतले इस्लामाबादमा हुन लागेको सार्क सम्मेलन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ । पाकिस्तानले आतंककारी गतिविधि गरिरहेकाले भारत सार्कभन्दा बिमस्टेकलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरिरहेको प्रस्ट भएको छ ।
बिमस्टेकमा पाकिस्तान सदस्य नभएकाले भारतले सार्कको विकल्पको रूपमा बिमस्टेकलाई अघि बढाउने विकल्प तयार गरिरहेको छ । यस्तै, पाकिस्तानले पनि एसियाली देशको प्रतिनिधिको रूपमा सेन्ट्रल एसियाली देशमा आफ्नो प्रतिनिधि पठाएको छ । यसबाट पाकिस्तान पनि इरानको साथ लिएर सम्बन्ध विस्तारमा लागेकाले भारत अझ रुष्ट भएको छ । जसबाट पाकिस्तान पनि इरानको साथ लिएर सार्कको विकल्प खोजिरहेको प्रस्ट भएको छ । भारतका पूर्वविदेश सचिव मुचकुन्द दुबेले सार्क पछिल्लो ३० वर्षमा निष्क्रिय रहेको बताएका छन् । राजधानी दैनिक